Fotoana famakiana: 4 minitra Ny olana eo amin'ny orinasa na ny tanjona kendrenao izay manasongadina anao tato ho ato? Ny vintana no vahaolana miankina amin'ny teknolojia. Arakaraka ny fitakiana ny fotoananao, ny tetibola ary ny fifandraisan'ny orinasa, ny hany maha-irery anao hijanona eo alohan'ireo mpifaninana nefa tsy ho very ny sainao dia amin'ny alàlan'ny mandeha ho azy. Ny fiovana amin'ny fitakiana fitakiana fihetsika ataon'ny mpividy Fantatrao sahady fa ny automatisation dia tsy misy ilana azy amin'ny resaka efficiencies: vitsy ny lesoka, ny vidiny, ny tara ary ny lahasa atao amin'ny tanana. Zava-dehibe ihany koa, izany no antenain'ny mpanjifa ankehitriny.